🥇 ▷ Ka dhig kumanaan kun oo isku-dar ah oo sixir ah 'Isku-xidhka Magic'! ✅
Ka dhig kumanaan kun oo isku-dar ah oo sixir ah ‘Isku-xidhka Magic’!
Isku dar Magic! waa Ciyaar cusub oo ka timid hal-abuurayaasha ‘Merge Dragons’ (waxaa jira asal ahaan), halkaasoo aad ka sameyn karto kumanaan iskudhaf ah si aad uhesho noocyo badan oo sixir ah. Waad u rogi kartaa iyaga si ay u ogaadaan kuwa awood badan leh una noqon karaan tababbarka dareenka kaas oo horumarku yahay wax walba.
Cinwaan aad si wanaagsan u fuliso muuqaal ahaan kaas oo kuu oggolaanaya inaad ugu dhowaato khibrad ciyaar oo wanaagsan. Gaar ahaan kuwa si fududwaana inaan u dhaqaaqnaa abuurka iyo walxaha iyada oo loo marayo heer aragtida isometric. Runtu waxay tahay inay tahay ciyaar kuu ogolaaneysa inaad jeceshahay oo kugu xiri doonta kuwii ugu horreeyay ee isbedelka.
Xallinta halxiraalaha adag ee iskudhafka sixirka Magic!
Fikradda ayaa ah in la isku daro ilaa saddex arrimood oo isle’eg, taasna way noqon kartaa ka abuuray sixir ilaa miraha geedka, si aad u hesho shay kale oo heer sare ah oo aan iskugu dari karno isla’egyada kale. Ma ogaan doonaan wax ku cusub ciyaarta, laakiin sida ay u wajahaan waa waxa ugu xiisaha badan.
Mid ka mid ah qodobbadeeda ayaa ah waxyaabaha kaladuwan ee aadka u ballaaran ee ashyaa’da iyo walxaha aan iskudarsan karno. Waxaan leenahay ukun, geedo, khasnado, xiddigo ubax sixir iyo xitaa xayawaanno taariikhiga ah. Waa halkaan halka ay ku jirto ‘Isku-darka Magic’! wuu kuu jabayaa adigaillaa 500 oo walxaha khiyaali ah oo sidaas ayaad ku ogaan kartaa sida aad ugu sii gudubto heerarkooda badan.
Waxaan si fudud waa in aan xulo xabbadood oo dhaqaaji u gudub qaar ka mid ah sanduuqyada heerka si loogu baddalo una gudub isugeynta waxyaabaha soo socda. In kasta oo aan lahaan doonno waxyaabo aad u adag oo carqalad ku noqon kara ciyaarta marka aan soo marnay heerar cusub.
Qariqdaas xun ee nagu soo food leh
Waxaan kahadalnaa ceelasha sharka ah ee soo galaya beerta. Waa inaan jabnaa habaar in lagu soo celiyo guriga oo ah caqabado 81 ah. Waxa aan yarayn oo taasi na keena dhammaan waqtiga madaddaalada ee aannu kula soo bixi karno ciyaartan. Ma jiraan sixirro xunxun iyo daqiiqaddo aan sugnayn oo ay tahay inaan sugno si aan u sii wadno ku raaxeysiga.
Isku dar Magic! kumana ilaawin dhacdooyinka aan kari karno u hel xayawaanno cusub oo geedaha u kaxaysta iyo inuu ogaado awoodiisa xoogga leh. Waa in la sheegaa in noocyada kaladuwan ee waaweyn iyo walxaha sixirku ay heer kasta u dhigayaan wax u gaar ah oo ay tahay in aan la kulanno.
Caqli ahaan caqliga ayaa marwalba xisaabta ku daraya in ciyaarta ciyaarta ay tahay mid aad u fudud, inkasta oo ay noo ogolaaneyso inaan nasiino
xirxira oo qaado waqtiyo kale oo aan sida caadiga ah aan ula qabsanaynin haddii aan ka nimid dagaalkii ugu cuslaa ee Royale ee xilligan maadaama ay yihiin Fortnite iyo PUBG Mobile; Jidadka, kan dambe ayaa heli doona helikobtarro iyo kuwa gantaallada ku rida qaab ciyaar cusub oo umuuqda inay wax walba jebin doonaan.
Bakooradda ka saar koofiyad sixirka
Isku dar Magic! Waxay ku timid rabitaan weyn oo ah inaad madadaalo leedahay oo xasilloonaan la’aan dhaqso. Wax intaa ka badan ma dhihi karnaa ciyaar u hartay si loo ogaado si aad u ogaato dhammaan waxyaalaha qarsoon iyo jardiinooyinkaas oo tilmaama aragtiyo badan si aad ugu yaraan u wada ogaato dhammaantood.
Farsamo ahaan, gaar ahaan aragga, waa cinwaan mudan in la xuso. Iyo runtu taas jawiga lagu abuuray aragtida isometric iyo noocyada kala duwan ee dabeecadaha iyo walxaha nooc kasta leh, waxay ciyaar kasta ka dhigayaan khibrad ballaaran oo garaaf ahaan ah. Waa ciyaar loo sameeyay inay isdejiso oo ay garaacistu u dejiso. Haddii aad leedahay taleefanka gacanta oo leh shaashad ballaaran, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si wanaagsan u kala saarto faahfaahinta muuqaalka ah ee uu haysto.
Cinwaan freemium oo loo yaqaan ‘Merge Magic’! taasna waxay dooneysaa inay gasho xusuusta gudaha ee moobaylka si aad ugu raaxeysan karto sidii wiil ama gabadh oo isku daraysa xayawaanka, geedaha iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaad ku helaysaa bilaash, inkasta oo ay tahay wax bilaash ah, oo ka socda Play Store sidaa darteed waxaad fursad fiican u helaysaa isku darka kaararka iyo garashada dhammaan jardiinooyinka iyo siraha ku sugaya.